‘ओ कोरोना विन्ती छ…’ भन्दै आए डा. डीआर उपाध्याय (भिडियोसहित) – Entertainment Khabar
काठमाडौं – कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)ले यतिखेर विश्वलाई नै आतंकित बनाइरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ)ले समेत कोरोना भाइरसलाई ‘महामारी’ घोषणा गरिसकेको अवस्था यसलाई कसरी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने भन्ने ध्यान विश्वको गएको छ । नेपालमा पनि यसको संक्रमणबाट अहिलेसम्म पाँचजना व्यक्ति संक्रमित देखिएका छन् भने नेपाल सरकाले ‘लकडाउन’ गरेको छ । कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न विभिन्न उपाय खोजिरहेको बेला गीत सङ्गीतका स्रष्टाहरुले यस सम्बन्धि गीत स्रोता/दर्शकमाझ ल्याइरहेका छन् । यही मेसोमा विश्व कीर्तिमानी गीतकार डा. डीआर उपाध्यायले ‘ओ कोरोना विन्ती छ, अब यो धर्तीबाट विदा लेउ…’ स्रोता/दर्शकमाझ पस्किएका छन् । राज सागरको स्वर र सङ्गीत रहेको लिरिकल भिडियो स्रोता/दर्शकमाझ आएको हो । दीप घतानीको मिक्सिङ/माष्टरिङ रहेको गीत भ्वाइस अफ नेपालमा रेकडिङ गरिएको हो ।